Samy manana ny endriny tiany indrindra ny tsirairay, satria tsara tarehy izy ireo, mahazatra, mahafinaritra sy kanto. Na izany aza, ny vokatra toy izany dia mitaky fikarakarana manokana, fitehirizana ary, mazava ho azy, ny fanasana. Raha mila fanavaozana ny akanjo vita amin'ny satroka voajanahary, dia tsara kokoa ny manome azy amin'ny mpanadio maina.
Alohan'ny hanasa ny akanjo ivelan'ny akanjo dia andramo amin'ny lafiny rehetra izany. Hahita marika miaraka amin'ireo marika rehetra ianao izay hanampy amin'ny fikarakarana akanjo.
Satria ny akanjo volon'ondry dia mitaky fitandremana amim-pitandremana sy malefaka, ny fanasana tanana dia safidy tsara. Amin'io endritsoratra io, ny akanjo dia mihosotra eo ambany elatra any anaty rano be. Noho ny faharetan'ny lava-drano ao anaty rano, ny vokatra volon-koditra dia tsy mahavita ny endriny, ka tsy maintsy atao haingana ny fomba fandroana. Ny lamba toy ny angora sy mohair dia tsy afaka misasa afa-tsy ny shampoo.
Saingy, satria tsy mora ny manasa volon'antsy volon'ondry amin'ny tanana iray, dia avela hampiasa milina fanasana izy. Ahoana ny fomba hanasana ny paompy amin'ny milina fanoratana? Ao amin'ny modely maoderina dia efa misy programa manokana, ohatra, ny "Wash wash" na "Wool" mode, tsara kokoa ny mampiasa azy ireo.
Ny fanontaniana manan-danja dia mitoetra - amin'ny inona ny mari-pana dia manasa ny sweater? Ny fahasamihafana amin'ny rano mafana rehefa manasa sy mangatsiaka rehefa manondraka ny rivotra. Noho izany, ireo fepetra roa ireo dia tokony atao amin'ny fitondram-pandrefesana mitovy ihany, amin'ny ankapobeny tsy mihoatra ny 30 degre.
Rehefa avy nosasana ny rano dia tokony hialana amin'ny rano, ny fitrosana dia azo ahosotra amin'ny lamba na lamba. Na inona na inona dia tsy tokony hangetahanao satroka matevina eo amin'ny fihiranao ianao, afaka mivoatra izany. Noho ny fipoahana ny tara-pahazavana, mety hivoaka ny vokatra, noho izany dia voarara ny akanjo volon'ondry amin'ny masoandro.
Ahoana ny fomba hanesorana ny fofona saka amin'ny pipia?
Ahoana ny famelana ny fandroana?
Ahoana ny fanatsarana ny bisy vy?
Ahoana no hanesorana tasy amin'ny dite na kafe?
Karakarao ny oven mikrô
Mitefy amin'ny varavarankely plastika
Ahoana ny fomba fialana amin'ny lokon'ny mavo?
Ahoana no hanesorana ny plastika amin'ny deodorant?
Fanasana lamba kely misy menaka misy menaka
Folk fanafody ho an'ny kakakaka
Aleo manasa kristaly?
Noho ny fanesorana ny tifitra amin'ny hatsembohana amin'ny akanjo?
Ahoana ny fomba hanasana ny akanjon'ny ankizy amin'ny tasy taloha?
Heparine albaney - fampiharana
Sehatry ny Tambov
Koala voahodina miaraka amin'ny akoho
Fiara fisaka misy divay
Sakafo afindrana ho an'ny ririnina
Andro iraisam-pirenena ho an'ny sakaiza
Ahoana ny fanakanana voatabia amin'ny ririnina?
Sakafo ho an'ny sakafo hariva
Mameno ny banky piggy amin'ny fiainana an-trano isika: 10 fomba tsy mahazatra ampiasana lamba rongony
Fampivoarana lalao ho an'ny ankizy 8 taona
Alika alika amin'ny alika
Photosession Megan Fox ho an'ny gazetiboky "Maxim"
Asparagus - mitombo any ivelany, toro-hevitra mahasoa ho an'ny fambolena